Isiteshi samandla Amaphayiphu Isiteshi, Abahlinzeki - China Isiteshi samandla Amaphayiphu Abenzi
Imininingwane Yezinhlobo: Imodeli ye-valve yamandla enuzi ephula i-valve Model: ZKPHF41F-150 150Lb, ZKPHF21F-300 300Lb Ububanzi Bokuqamba: I-DN 20-50 Umkhiqizo usetshenziselwa iyunithi le-AP1000 njengemishini yokudonsa ingcindezi yokuvikela ingcindezi yayo ephansi ngokweqile ekulimaleni imishini. I-1.Ngohlobo lokuchithwa kwentwasahlobo yohlobo lwentwasahlobo, i-valve yokuphula i-vacuum ifaka ingcindezi elula njalo nokulungiswa nokufakwa okulula. Ivelufa yakhelwe ngokwezinga lengcindezi nengcindezi yalo ...
I-M60A i-vacuum breaking valve
Imininingwane Yezinhlobo: Imodeli yamandla we-nyukliya yokuphula i-valve Model: I-JNDX100-150P 150Lb Ububanzi Bokuqamba: I-DN 100-250 Isetshenziselwe uhlelo lwe-condenser yesiteshi samandla enyukliya, inokusetshenziswa kwengcindezi okungekuhle, ukuqeda ingcindezi enhle nemisebenzi yokuvikela ukuvuza kwamanzi. ukwephula i-valve, i-valve ezenzakalelayo, ayidingi idrayivu eyengeziwe lapho isetshenziswa. Esimweni esivamile sokusebenza, amandla ahlangene entwasahlobo naphakathi asebenza ku-valve disc ecindezela i-valve d ...
Izinga lokushisa nokucindezela ukunciphisa i-valve yokwehla kwengcindezi ephansi
Imininingwane Uhlobo Lokucindezela Ukunciphisa I-Valve Model Y966Y-P5545V, Y966Y-P54.550V, Y966Y-P54.535V, Y966Y-P54.530V Ububanzi Bokuqamba DN 200-450 Ngesimo sokusebenza sokushisa okuphezulu kanye nengcindezi enkulu nokwehluka kwamazinga okushisa, yamukela okuningi umkhono -step wokuncipha kwengcindezi nokucindezela kokuvula emuva entwasahlobo umlomo wombhobho wokufafaza amanzi nokwehlisa izinga lokushisa ukuqinisekisa ukushisa nomphumela wokunciphisa ingcindezi. Izinzuzo Valve isakhiwo se-angular a ...
Ukushisa nokucindezela ukunciphisa i-valve ye-high pressure resistance bypass
Imininingwane Uhlobo Lokucindezela Ukunciphisa I-Valve Model Y966Y-P54.5140V, Y966Y-P55190V Ububanzi Bokuqamba DN 125-275 Inesimo sokusebenza sokushisa okuphezulu nokucindezela okukhulu nokwehluka kwamazinga okushisa. Yamukela imikhono enezinyathelo eziningi yokwehlisa ingcindezi kanye nesifutho samanzi esiza umusi wamanzi wokunciphisa ithempelesha ukuqinisekisa umphumela wokushisa nokucindezelwa kwengcindezi. Izinzuzo Valve isakhiwo se-angular kanye nesiqondiso sokugeleza okuphakathi ukugeleza ...
Ingcindezi yokunciphisa i-valve yensimbi yokushaya isiteshi sokunciphisa i-pre-heater yomoya
Imininingwane Uhlobo Lokucindezela Ukunciphisa Ivelufa Imodeli Y666Y-P55 80Ⅰ, Y666Y-1500LB Ububanzi Okuzisholo DN 100 I-soot blowing ukunciphisa valve ye-600 kuya ku-1,000MW super-criti (ultra-supercritical) air pre-heater ithatha izinga lokushisa eliphakeme lokushisa umusi njengomthombo womoya ovunguzayo. Ingcindezi incishiswa yi-valve yokulawula yesiteshi sokunciphisa isobho futhi inikezwe isot blower njengomthombo ovunguza umthombo womoya. Izinzuzo Umzimba we-valve usebenzisa i-welding stru ehlanganisiwe ...
Ingcindezi yokunciphisa i-valve yesiteshi esinciphisa ukushaya
Imininingwane Uhlobo Lokucindezela Ukunciphisa I-Valve Model Y669Y-P58280V, Y669Y-3000SPL Ububanzi Bokuqamba DN 80 Isetshenziselwa uhlelo lokushaya lwensizi olungu-600 kuya ku-1,000MW supercritical (ultra-supercritical) thermal power unit boiler. Izinzuzo Umzimba we-valve usebenzisa isakhiwo se-angular esakhiwe ngensimbi ngamandla aphezulu kanye nesiqondisi sokugeleza okuphakathi luhlobo lokuvula ukugeleza ukuhlangabezana nezidingo zamandla ngaphansi kwezinga lokushisa okukhulu nengcindezi. It has Butt Welding ngepayipi. I-valve s ...
Isifutho samanzi esilawula i-valve yengcindezi ephezulu yokudlula
Imininingwane yohlobo lokulawula i-Valve Model T761Y-2500LB, T761Y-420 Ububanzi Bokuqamba DN 100-150 Ilawula izinga lokushisa elehlisa ukugeleza kwamanzi nezinga lokunciphisa ingcindezi lokunciphisa ingcindezi enkulu ye-steam turbine. Ngesimo sokusebenza kwengcindezi ephezulu nokwehluka okukhulu kwengcindezi, isebenzisa imodi yezimpikiswano yezinyathelo eziningi ukuvimbela ukuvela kwe-cavitation kanye ne-flash evaporation. Izinzuzo Valve isakhiwo se-angular nokuqondiswa kokugeleza okuphakathi ngu ...
Ukulawula i-valve yokudlula kwamanzi okuphambili
Imininingwane Uhlobo Lokulawula I-Valve Model T668Y-4500LB, T668Y-500, T668Y-630 Ububanzi Bokuqamba DN 300-400 Isetshenziselwa ipayipi lokuhambisa amanzi eliyinhloko le-boiler yeyunithi engu-1,000MW supercritical (ultra-supercritical) yokulawula ukugeleza kokugeleza kwamanzi. Okuhle Ivelufa luqondile uhlobo lwesakhiwo, ukugeleza okuphakathi nendawo wuhlobo lokugeleza nokubekwa uphawu kwesihlalo se-valve kukude nendawo yokugcina yokuhwamuka komhwamuko ukuqinisekisa impilo yenkonzo. Umzimba we-valve ...
I-valve yokulawula ukukhipha okuphuthumayo ye-heater ephezulu
Imininingwane Type Model Valve Model Z964Y Pressure PN20-50MPa 1500LB-2500LB Diameter Diameter DN 300-500 Isetshenziswa njengamadivayisi wokuvula nokuvala wokupompa isistimu noma ezinye izinhlelo zamapayipi okucindezela aphezulu naphakathi kuka-600 kuya ku-1,000MW iyunithi e-supercritical (ultra-supercritical) i-turbine yomusi. Izinzuzo Umzimba we-valve nebhonethi yamukela isakhiwo sokuxhuma esisezingeni eliphakathi, esifaka ukuqaqa okulula. Zombili iziphetho zamukela ukuxhumana okushiselwe. Idiski ye-valve ...
Imininingwane Yokulawula Uhlobo Lwe-Valve Model T964Y-420Ⅰ, T964Y-500Ⅰ, T964Y-2500LB Ububanzi Bokuqamba DN 250-300 Isetshenziselwa ukulawulwa kwezinga lamanzi kwethangi lamanzi elingu-600 kuye ku-1,000MW iyunithi e-supercritical (ultra-supercritical) nokufeza injongo yokulawula izinga lamanzi ethangi lamanzi ngokuvuleka okungafani. Izinzuzo Umzimba we-valve usebenzisa ukwakheka okuphelele ngamandla amakhulu futhi i-valve isebenzisa isakhiwo sohlobo lweplunger ngokugeleza okushelelayo ...
Khama valve ye-steam-water system
Imininingwane Type Drain Valve Model PJ661Y-500 (I) V, PJ661Y-630 V, PJ661Y-P54290 (I) V, PJ661Y-P61310 V Ububanzi Bokuqamba DN 40-100 Umkhiqizo usetshenziselwa uhlelo lwe-steam-water boiler noma i-steam turbine yeyunithi yamandla ashisayo e-supercritical (ultra-supercritical). Izinzuzo Umzimba we-valve usebenzisa isakhiwo sokukhohlisa jikelele. Uhlobo lokuvala lomzimba we-valve nebhonethi isebenzisa ingcindezi yokuzivala. Uphawu ebusweni esihlalweni valve has Stellite 6 ingxubevange ...
Umfutholuketshezi-indlela ezintathu valve amanzi okuphakelayo ingcindezi
Imininingwane yohlobo lwe-Three-way Valve Model F763Y-2500LB, F763Y-320, F763Y-420 Ububanzi Bokuqamba DN 350-650 Ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile kwesifudumezi esiphezulu se-600 kuya ku-1,000MW iyunithi yamandla kagesi ashisayo (umgwaqo omkhulu) kwe-valve yezindlela ezintathu endaweni yokufaka i-heater ephezulu iyavulwa futhi ukudlula kuvaliwe. Ukutholakala kwamanzi kubhayela kufaka ukungena ku-heater ephezulu kusuka kumzila omkhulu ngaphambi kokungena kubhayela nge-valve yezindlela ezintathu e-high pre ...